शुरु भयो फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया, नेपाल टेलिकम र एनसेलमध्ये कसले लग्ला बाँकी फ्रिक्वेन्सी ? - Technology Khabar
» शुरु भयो फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया, नेपाल टेलिकम र एनसेलमध्ये कसले लग्ला बाँकी फ्रिक्वेन्सी ?
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पहिलो पटक गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन शुरु भएको छ । दूरसंचार प्राधिकरणले नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल प्रालिबिच अहिले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सीको अक्सन गराउँदैछ।
अक्सनलाई तीन चरणमा गरिनेछ र प्रत्येक चरणमा दुबै कम्पनीहरुले बन्द खामभित्र आफूले चाहेको रकम बाेली लगाउँदै अक्सन एडमिनिस्ट्रेसनलाई बुझाउनेछन र तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा अधिक बाेली लगाउने कम्पनीले अक्सनमार्फत फ्रिक्वेन्सी लानेछ ।
फेसबुकले आफ्नै क्रिप्टोकरेन्सी ल्याउँदै, बनायो छुट्टै ब्लकचेन डिभिजन